कुन दिन जन्मनेले के काम गर्ने ? हेर्नुहोस् जन्मबार अनसार फलदायी हुने पेशा ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कुन दिन जन्मनेले के काम गर्ने ? हेर्नुहोस् जन्मबार अनसार फलदायी हुने पेशा !
हरेकको जन्म बार र समयबाट जन्मकुण्डली बनाउने वा भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आफू जन्मेको बारको ग्रहको प्रभाव जीवनभर रहने गर्छ। आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको हुन्छ भने बुधवार बुधको प्रभाव रहने गर्छ । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । यी ग्रहहरुले तपाईको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई जन्म जन्मबार अनुसार फलदायी पेशाको बारेमा जानकारी दिन जाँदै छौँ।
आईतबार: आइतबार जन्मिने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता व्यक्ति कम बोल्ने र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यिनीहरुले २२ वर्ष पछि अधिक धन लाभ गर्ने अवसर पाउने छन्। यस दिन जन्मिएका व्यक्तिहरुले मार्केटिंग तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा आफ्नो राम्रो छाप छोड्न सफल हुने भएकाले यिनीहरुले व्यापारमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्छन।
सोमबार : सोमबार जन्मिने व्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ। सोमबार जन्मिने व्यक्ति विध्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरुका लागि कृषि, बैंकिङ, चिकित्सा शिक्षा र निर्माण क्षेत्रमा उपयुक्त हुने गर्छ।
बिहिवार: यस दिन जन्मिने पुरुषहरु निकै विध्वान र पराक्रमी हुने गर्छन। बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरुलाई जुनसुकै पेश गर्दा पनि राम्रो हुने देखिन्छ तर हरेक कार्यमा संयम रहन आवश्यक रहन्छ। विशेष गरेर यी व्यक्तिका लागि शिक्षण पेशा फलदायी मानिने गर्छ।
यसरी पक्राउ परे एनसेलको कार्यालयमा बम विष्फोटन ६ जना अभियुक्त -पुरा हेर्नुहोस